प्रविधि - AnkaPatra
२ पुष २०७७, बिहीबार १२:४१
जुनारमा प्रविधि: अब मोबाइलमै सम्पुर्ण विवरण
सिन्धुली । सिन्धुलीको जुनार भन्नेबित्तिकै सबैको मन लोभ्याउँछ। नौलो फल भएर खाउँ-खाउँ पनि लाग्ने! तर, तपाईंले खाँदै गरेको जुनार सिन्धुलीकै हो त ? कसको र कुन बगैँचाको जुनार हो ? उपभोक्ताले कसरी थाहा पाउने ? अब ‘क्यूआर स्क्यान’गरेर ‘कुन जुनार कहाँको ?’ भनेर उपभोक्ताले विस्तृत थाहा पाउन सक्ने भएका छन्। ग्रीन ग्रोथका सहसञ्चालक सौरभ ढकाल भन्छन्, […]
गोबर र बड्कुला ल्याएर सिन्धुलिमा जैबिक मल उत्पादन गरिने
सिन्धुली । सिन्धुलीका युवा उद्यमी सिताराम पहाडीले जैविक मल उत्पादन कार्यलाइ अगाडि बढाएका छन । पहाडीले करिब ५० लाख रुपैया लगानीमा कमलामाई नगरपालिका–५ सिलामेमा गाँईबस्तुको गोबर र बड्कुला प्रयोग गरी जैबिक मल उत्पादन शुरु गरेका हुन । करिब तीन महिना अघिदेखि सुरु गरेको जैबिक मल उत्पादनको ल्याब परिक्षणको नतिजा अहिले पर्खिरहेको उद्यमी पहाडीले बताए । […]
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १५:०६